Al-shabaab Oo Sheegtay inay Ku Dileen Saràakiil Imaraadka Carabta Weerrar Khasaare Dhaliyay Muqdisho - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Al-shabaab Oo Sheegtay inay Ku Dileen Saràakiil Imaraadka Carabta Weerrar Khasaare Dhaliyay Muqdisho
Mogadishu(ANN)Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay inay ku dileen weerar at la beegsadeen kolanyo gaadiid ah saraakiil u dhadhay dalka Imaraadka Carabta.
Sidaana waxa warbàahinta u sheegay Afhayeenka Xarakada Al-shaaab Sheekh Cali Maxamuud Raage, wuxuu sheegay in gaadiid Kolanyo ah lala beegsaday gaadhi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, halkaas oo sida uu sheegay ay ku dhinteen sadex ka mid ahaa wefdiga oo u dhashay dalka Imaraadja Carabta I yo saraakiil afrikaan ah.
Sidoo kale waxa uu Afhayeenka Al-shabaab sheegay in Laguna dilay weerarkaa dhawr I yo toban askarta dawlada ah.
Dhinaca kale saraakiisha caafimadka Muqdisho, ayaa sheegay in ugu yaraa 21 qof oo dhaawacyo Kala duwan kasoo gaadheen qaraxa Laguna dawaynayo Cusbitaalada magaalada Muqdisho.
Xukuumadda Somalia ayaan wax war ah kasoo saarin weerarkaa ilaa hadda. Sidoo kale dawlada Imaraadka Carabta too Al-shabaab sheegtay inay sabab u ahayd werrarkaa too Laguna dilay saraakiil u dhashay UAE